San Htun's Diary: ကျွှနု်ပ်နှင့် တစ်ကဒ်များ...
New York မှာ ticket မထိတော့ဘူး ထင်တယ်။ ကား သိပ်မမောင်း ရတော့လေ။ haha
Thanks. So fun to read.
တကဒ်ကလည်း တော်တော် တန်ဖိုကြီးတာပါဘဲလား